Kwinkqubo yogcino Swedish | Apg29
Inxalenye ezintathu ethi The ikheshi itulo Cash kuphela.
I Riksbank isebenzela lonke ixesha, nangona 'cala "yakhe isityholo ukusetyenziswa yancitshiswa ngemali. Riksbank bashicilela ngonyaka ingxelo ebizwa ngokuba "Financial Market I-Swedish". Oku kuquka manani kwi iintlawulo. Apho unokufunda iinkcukacha-manani ezifana zingaphi-ATM kunye ezinjengeetheminali yekhadi kukho eSweden.
Iibhanki zabucala usoloko ezinkulu ezine. Nordea, Swedbank, SEB kunye Handelsbanken. Iibhanki unayo imali owahlukileyo digital ukuba kusetyenziswa kuphela ngaphakathi elunxwemeni ngokwayo. Iibhanki nabo ngokwezinga elithile enye kwenye yaye engena ngaminye ezinye izibambiso kungase kube ziingxaki zemali nezinye izakhiwo yingozi. Kuye kuvamile ukuba ezinye abadlali ezifana neenkampani ze-inshorensi kunye nezidanga esikhulu ezifumene iwonga ibhanki. Kumazwe ngamazwe, Sweden elidityaniswe imimiselo zebhanki ekuthiwa Basel III. Lo mgangatho kufuna uzinzo kwezemali iibhanki '. Ngaphandle kwale nkqubo core kukho "maleko" amabini, wenze ukuba mna enamanqanaba II, nto leyo kakhulu luqulathe amatyala. Oku kakhulu zofihlo, kodwa kulungile ukwazi imiqathango kwabo ukuze kamva abafuna ukuzigcina ngokwabo ngakumbi kwinkqubo leebhanki.
I Riksbank kunye neBhunga General ibisoloko babenolwalama- kufutshane epalamente. Kwakhona Riksbank ine Board Executive. Kule 1600s, eSweden waba ibhanki labucala. Riksbank nazo yibhanki emva imilinganiselo yathengwa ngurhulumente. Riksbank wathabatha imilo ngexesha Regency neyilahleko phambi uKarl XIs wobukumkani. Ekuhambeni kwexesha lethu, iibhanki unoxanduva ukuxhatshazwa kunye Riksbank wenza ungumgcini bonke abemi Swedish ngokuthintela kangangoko kunokwenzeka ukusebenzisa imali.
I Riksbank xesha ububange yokukhutshwa yamaphepha. Kule 90 yokuqala baqalisa nkqubo karhulumente ukuze baqwalasele kwamaxabiso kunokuba ngeranti. Le Riksbank imali ilawula rinns kuphela kwi Riksbank. eziphambili sixhobo Riksbank ukuba ukulawula inzala kukuba ukutshintsha isantya senzala yemali ukwenzela ukuba ezinye iibhanki ziya kulandela ngethemba. Imeko yezimali kunokuba bolunye ukuba izinga lenzala yemali i negative. Xa oku kusenzeka kwaye iibhanki zilandelayo ungathanda e Denmark kuvela kufuneke imali angabamelwane.
I Riksbank isebenzela lonke ixesha, nangona 'cala "yakhe isityholo ukusetyenziswa yancitshiswa ngemali. Riksbank bashicilela ngonyaka ingxelo ebizwa ngokuba "Financial Market I-Swedish". Oku kuquka manani kwi iintlawulo. Apho unokufunda iinkcukacha-manani ezifana zingaphi-ATM kunye ezinjengeetheminali yekhadi kukho eSweden. I-Bank iye nayo yapapashwa ngonyaka omnye ingxelo iintlawulo ebizwa "Iintlawulo neevenkile kwimarike Swedish."
Inxalenye enkulu kwinkqubo yogcino Swedish yenziwa rix. I Riksbank kaThixo rix sys-nkqubo iza kubangela iintlawulo ezinkulu ingenziwa phakathi zonke iibhanki ezinkulu. Uninzi iintlobo iintlawulo hamba nge rix ingaba yimali, ikhadi, letyala, izibambiso okanye zemali. A okuyimfihlakalo encinane ingenzwa ukuba kuthiwe rix "elihlala iintlawulo kwamatyala kunye ezifunyanwayo ngokuqiniseka kulawulwa". Mhlawumbi bit ngqiqweni rix deal abe-kubhalwa kunye nemali digital. Luhlobo ibalulekileyo iintlawulo, inkamnkam ezifakwe kwi-akhawunti kwamatyala kwi Riksbank nge rix.
Ukuzalisa beebhanki Swedish kwaye amanye amazwe baye akhawunti e rix - nkqubo. Phakathi kwamanye amazwe buqapheleke Citibank kunye Morgan Chase. Ezinye iibhanki gaiteros Bank kunye Ecobank ongadibenanga rix. Iibhanki abangenawo akhawunti rix Usengasebenzisa inkqubo nge proxy.
ENkosini Princess Mint, Dragon Credit Card kunye Black Knights
Kwakukho kanye okweqanda ogama Mint. Wahlala phezu koko ndabona ukuba ubutyebi enkulu cash ngohlobo iinkozo zemali kunye engamaphepha. Kodwa nokubonakala uyazikhohlisa. Of le imfumba enkulu, kwaba kuphela ebusweni ngohlobo ekhulwini ezimbalwa yayiba imali. Ngexesha phezu ecwebezelayo ukukhohliswa izigidi credit cards. Embindini imfumba, kwaba nje kulowo owadalwa yi umlingo embi. Ithe yakwaphula mpela wabiza imali yedijithali wafumana khangela enkulu kakhulu kunokuba enyanisweni imfumba rhafu. Ehlabathini ngohlangothi imfumba bathontelana oothikoloshe ezincinane ezingcolileyo ebizwa kubalondolozi. Kamsinya nje umntu wazama axhwile ingqekembe ukuze Lalifutha wabonisa amazinyo akhe yokusizila. Kwaba kuphela magama abo bambiza ayithathe le mali.
Igongqongqo embi kunye knight yakhe emnyama ikhadi lamatyala ikheshi wayefuna ukuba yonke imali ayixhelele inkosazana. oontloyiya ezinjalo kunye zokungqinga zerhafu lobuxoki olwalukho kumazwe amaninzi. Kudala-dala, iindonga irhafu phantse kuphela yayiba imali. Kodwa emva abaneshologu ububi ilizwe elikhulu elikude SamUSAmien wadala neempungutye ezimfutshane, iicredit cards kunye umsantsa ngoncedo umlingo abamnyama baba waba yintoni. Abaneshologu bebehamba phakathi onke amazwe, utshabalalisa ngokufumba irhafu ngokuzalisa nabo kunye namakhadi ngetyala nengekhoyo. Ezintathu nakoosiyazi kunazo zonke zaba abazalwana Mastro, Expresso kunye Dinero.
キ 1 "ukuphanga!, Ukuphanga!" Kumemeza le knight.
Oku kwenzeka xa umntu weba imali enye imali encinane ndawana Finansien.
キ 2 "Ukuba ususe isibonelelo cash, akukho nto ukweba!", Uthi ngokuzithemba.
(Financial nelawula Authority i-arhente phantsi yoMphathiswa wezeMali. Le sidalwe ngo-1991 ukususela ngokudibana nezinye ii-arhente ezimbini. Msebenzi yalo esentloko kukuba iliso izibambiso zorhwebo kunye neenkampani zemali. I FSA iye kwakhona umsebenzi 'ukomeleza ukuma kubathengi kwimarike zemali. "Yonke into ikheshi isigqibo ngokupheleleyo phezu kweentloko zethu .)
Esinye isibini of kartel ngokufanayo propsar kuluntu ikheshi Ihowuliseyili Development kunye Swedish Trade. Owayesakuba lisisiseko uphando kwaye ikamva umbutho ishishini. Ke kaloku Knights isigqibo oko kwakuza kwenzeka kweli ibali topsy-turvy. Ukuba ahambe kunye bandihlabe amakrele abo entliziyweni inkosazana Mint amahlwempu nangona yena wakhala bababongoza ngenxa yobomi bakhe. Ekubeni ke groveling ke ngoko ukukhasa dragon ikhadi Credit ngukumkani phezu lonke ilizwe. Inamba Bazitshisile zonke iindleko kunye zakhe ezivuthayo
umoya. I Knights wathatha yonke imali evela imfumba balahlwa inkosazana kunye nabo echibini.
Babesazi kakuhle kakhulu ukuba inamba ngaphandle iingxaki iingxande umzimba ufile inkosazana ngamnye angenwe. Kodwa kuthekani ukuba wayesele ngephutha ngengozi nengqekembe okanye ezimbini ngaxa lithile, mhlawumbi wayesele athungwe ubugcwabalalana kwi impahla njengesibambiso. Inamba enyanisweni uyalisa kakhulu imali. Kungenxa yoko le Knights bagqiba uku rhweba ifayile ye inkosazana sedikeni endaweni yokumnika ukutya kwakhe nenamba. Inamba ngoku ame imfumba lwakhe elikhulu credit cards. Ukuba nabani na echaphazela ngokungalunganga kuye Nanidloba ukuba nje ixhoba kunye nekhadi enkulu aphezulu ngetyala ukuze belivile kwisixa kunye nobunzima. Ekupheleni kwebali.
Xa ethetha malunga ukususwa eziinkozo ichase ikheshi kwi Sverge asikwazi ukuba ekuhambeni kwexesha ukuthintela ngoko ubuncinane ekulibaziseni ngantsomi uba ngokoqobo.
Ukuba kuyenzeka abanobubi, sikholelwa ukuba nkqu tale ezimbi ufumana phambili apho yonke iphela kakuhle.
Kuthekani ukuba amahlelo mali ophela ngokuthe ngcembe?
Malunga iwaka patch ziyasuswa isenokungabi kwalo umahluko ngaphandle kwabo, umzekelo, athenge imoto ebiza ngakumbi ngemali. Kodwa ukuba zombini -kronors 500 no-200 -sedlarna nokususwa iqala iingxaki zokwenene. Clothing kunye nokutya isebenze kakuhle, kodwa kuphela ngokwemigaqo yentengo kanye. Kodwa ukuba umntu uthenga isithuthuthu ngenxa 25000 kunye ngekhulu lamaqhosha ukuba umthengisi ukubala yamaphepha-250. Ngaba 200 - yamaphepha kronor kwenzeka khona, yena Nangoku kangako konwaba ukuze ubale ukuya 125. kokuchitha xi xa kusenzeka ukuthetha naye ngoxa abala umthengi. Emva kwexesha elithile, ukuze angavumi ukuba ukwamkela imali eninzi imali. Cash ifumaneka kumahlelo ahlukeneyo kuba yeyona ndlela pfunaka.
Abasemagunyeni bathathe lonke ithuba ityala zokuqhekeza ukususa imali endaweni zokusombulula iingxaki ngendlela eyakhayo. Uluntu uyayiphulaphula ukuba. Olunye uphononongo lufumanise ukuba, ukuba pesenti 12 kuphela abo bacinga iwaka akuyomfuneko. Kwiminyaka embalwa edlulileyo yaba soloko-uzipapashe kakhulu Jonkoping. Oko kwiintsuku nje ezimbalwa emva koko, owoyiswayo FSA ukuya amabala eziliwaka baza kususwa. Ekuhambeni kwexesha na ngoko kwakhona ukususa amabala ezimakhulu mahlanu nekhulu tag.
Umntu acha- phakathi kwemali kunye nezithuthi. Bekuya kuba ngathi ukuba kude ukubiwa kwemoto kuya kuthintela iilori neemoto. iibhayisikile kuphela kunye ngezithuthuthu baya kuvunyelwa ukuba bahlale nto leyo ke kunxibelelana amahlelo imali encinane. Ngokusesikweni, ufuna ukuba ngezithuthuthu neebhayisekile ukuba shwaka kakhulu. Ngaba sifanele mhlawumbi sibeka phantsi nayiphi ekhemesti kuba kuyenzeka ukuba bebe amanye amayeza kunye nokusebenzisa iziyobisi? Ukuze bahlale bezibeka zokuqhekeza ukuze ususe imali loyiswa erhangqwe ku kobuntwana olunyulu.
Xa imali krona-100 kwaye kancinane iya kusala, oko kukubaleka siseko ngemali konke konke. Ngoko zama kwindawo yokuphuma ebhankini (Ukuba owukwazi ukurhoxisa imali khona) becela kronor 3,000 ngo-50 - okanye iziqwenga 20. Ngaba ucinga ukuba abasebenzi bank ukulawula zizixwenga zamafu kakhulu kwemali njenge umatshini ukubala phezulu okanye inani okubi kufuneka 150 amanqaku ukubala manual kwenzeka ukuba ahlale phezu ebhankini? Akufane 75 amahlanu nokuba ziingceba. ATM ezisekelwe ukurhoxiswa amahlelo engamaphepha. Ukuba umntu kuthiwa kuvunyelwa zibize-50 no-20 ukudibana kuya kuba zizixwenga zamafu yemali koomatshini. Ixabiso elipheleleyo imali kumatshini ntli wayeza ukunciphisa kunye nomthamo imali kuba ezinkulu ngaphantsi esilawulekayo ukuba ethwala imali eninzi.
Kuye kwezinye yokuhlala kuye izindululo ukuba iinkozo zemali kuphela ukuya ku-50 ixabiso kroner ngaphandle amanqaku. Oku kuya ukunciphisa ngaphaya umbundu iintlungu imali ekufuneka kufikelelwe usecicini ngokubanzi. Yintoni eyayiza kwenzeka etsalwe kwi umatshini ebhankini kunye wokuthengisa? Kakhulu akunakwenzeka ukuba uya kuba nako ukuthabatha iingqekembe kwi umatshini imali ngoko. adlula Coin okanye mhlawumbi eziinkozo ATM nezakudala ngathi umatshini slot omdala okanye yintoni? Lutho. Ingxaki kukuba ube wena ucinga ngayo kule hlobo isiphakamiso okanye mandithi ukuba kuphela imali ukususwa iliso.
Kwakuthetha kakuhle ukuba kufuneka ukurhoxisa imali kwi zijongene endaweni neengxaki iqhotyoshelweyo. Iivenkile ingase Kakade kwakhona umqulu kakhulu omkhulu ebonakalayo imali kodwa kwixabiso elincinane lilonke. izithuthi Imali iya kuba uziindleko kakhulu kwaye kube nzima kakhulu ukuzilawula. Nangoku, ukurhoxiswa kwemali kwishishini ilahleko ngenxa umthengisi. Kuyinto kude bonke abakwaziyo. I ucinga ukuba iinkozo zibe ngcono kwaye practical ngaphezu engamaphepha. Kodwa ke kuya kubakho imali lwamahlelo. Nkqu enyangweni.
Kuye lula ukuqonda ukuba kule meko, ngoko ke, nayo ngaphandle nge-ATM. Ngaphezu koko, isibakala kwakhona uttagsutomaterna into embi gqitha kuba ifuna ikhadi ukusebenzisa ngetyala, kunye nemisebenzi baxhelela ebhankini. Business kusenokwenzeka ukuba babe mbalwa kakhulu ukuba ufuna ukusebenzisa imali. Ezinye iibhanki unike kuphela ngaphandle-kronor 500 ekhawuntareni ngenkqubo evaliweyo ukhuseleko ekhuselekileyo. Kuyinto elula ukuba ezi iibhanki uza kubuyela amanqaku ezincinane kwakhona.
Kakade ke wayede kuba kunokwenzeka ukuba ukujongana amanqaku-20 kuphela kwaye imali ngokuthenga ukutya ngexesha uthenga impahla cheap okanye kusetyenziswa. Kodwa ke ingxaki gqithi kuvela ukufumana ndibabambe amakhulu esayilwayo encinane nyanga nganye. Musa ukucinga ukuba iibhanki kuya kunika aba. Isisombululo likaxakeka kakhulu Ndacinga ukuba 'bathenge' ezinkozo uqengqa ukuthenga cheap
ezahlukeneyo ze kubalulekile. Coins aba kukuninzi ezifana fairgrounds. Njani Iiveranda kunye abarhwebi ukufumana imali? Indlela esebenza mna andazi kodwa kuya kuba umdla ukuphanda nangakumbi.
Kwanele ukuba asuse amahlelo ezimbini ezinkulu imali, ukuba mhlawumbi elibharhileyo ukuqokelela imali eseleyo iibhanki imali yokuphatha mhlawumbi nayo koomatshini. Kwabo bafuna ukugcina imali kuvela ngoko ukwenza ukuxhathisa kangangoko kunokwenzeka ukuze kususwe ihlelo ngoku. Xa yenziwe Ukuzimaseka phantse ngokupheleleyo ngemali.
Yintoni umahluko phakathi credit cards kunye nezinye modernities embalini?
Umahluko kukuba amagunya karhulumente, iinkampani zemali kunye neevenkile ngokuthe atsho uphuhliso kuluntu ikheshi ngokupheleleyo ngaphandle iinketho. It is ze ngaloo nto ekuhambeni kwexesha njengoko uluntu kufuneka babe nelungelo lokuzikhethela phakathi amakhadi credit (kunye nezinye izinto non-cash) okanye imali. Unyulo siseza othile kuhleliyo nje kuba ukumelana ethile kuphuhliso. Cars ziye ngokukhawuleza, sleeker, yayila lula ngakumbi kwaye sitshiphu ngokuhamba kweminyaka. Ekuhambeni kwexesha, ngenxa yokuba abantu ngokuzenzekelayo bathenga iimoto ezingaphezulu. Kodwa ke ngokwalo credit cards, ukuba uphathelene ngesinyanzelo coaxing amukeleke ukohlwaywa ngokuthe ngcembe ukuba abantu bazisebenzise.
Umzekelo kwimbali yendalo kunye nophuhliso lobuxhakaxhaka ke uluntu lesibonelelo okanye ukwazi ihambisa kude imida yokuqala. Kunokuba zisukela abantu Stone Age ngenxa födosöket abafuna amabala lokuzingela ezintsha emkhathini. Ngokusebenzisa uphuhliso zokulwa kunye nezixhobo wemvelo, nangona ezimbi kakhulu. Kodwa ke uphuhliso kontantlösheten akukho yemvelo nge. Kuyinto kokubili nemvelo
nezimbi. It is a uphuhliso esigwenxa kakhulu beqhutywa kukubawa kunye nokusetyenziswa gwenxa kwamagunya olawulo. A imposiso engundoqo ingxabano ikheshi kukuba kontantlöshet uchazwa yophuhliso yendalo. Nabani na ozicingela ukuba kontantlöshet luphuhliso zendalo Aya kutyatyamba mhlawumbi ngamakhulu eminyaka ukwenza okubi. Iinkqubo nga kunokuba kufaniswa izilwanyana mutated kwaye atrophied njengoko eziphilayo na okanye kufuneka ukusinda ekuhambeni kwexesha.
Ungakhetha ukuhamba, umjikelo, kukhwela ibhasi okanye uye ngemoto emsebenzini. Nangona imoto iye ifumaneke uluntu malunga nekhulu leminyaka, kusekho abaninzi abafuna ukuba ngaphandle imoto. Kukwanjalo uya kuba ifowuni, umabonwakude, irediyo, i-Internet, iikhompyutha njalo njalo. Lowo ngoko musani ayeke ngokusetyenziswa kwezibane ukukhanya oveni yombane kuba ezi kuyimfuneko kunye nophuhliso zendalo. Kodwa kule meko, kusekho ithuba ukusebenzisa amakhandlela kunye nezitovu zeparafini njengenye abo bafuna. Bekuya kuba njengempambano kwaphela kakubi ukuba ukunyanzela wonke ukuqhuba. Kodwa ke ngokwalo amakhadi ngetyala i ukuphululwa zokwanda. Akukho nto ibonisa ukuba kontantlöshet luphuhliso zeteknoloji esempilweni kunye zendalo.
Vecka 9, söndag 7 mars 2021 kl. 04:19